I-ISPY - 3G IP Cam - Inkxaso ye-3G sim khadi kunye ne-Wifi (IP010) | Izisombululo ze-OMG
I-OMG ISPY-3G IP Cam-Inkxaso ye-SIM khadi ye-3G kunye neWifi (IP010)
ISpy-Ukhuseleko lwekhamera ye-IP
I-Wireless 3G wifi IP Security CCTV Ikhamera
Ukugcina iliso kwikhaya lakho kulula, nokuba ngamawaka eekhilomitha kude. Qhagamshela nje i-3G ye-Wi-Fi yokujonga ukhuseleko kwikhamera (iSpy) kwaye uyishiye isebenza. Ungajonga nangaliphi na ixesha nge-smartphone yakho ukubeka iliso kwindlu yakho kwaye ungaphumla kulwazi lokuba nabani na ongena ngaphakathi uya kulumkiswa kwangoko ngokubanjwa kwabangeneleli abathunyelwe kwiselfowuni yakho. Ngoxolo lwengqondo ungajonga okwenzekayo endlwini nge-720P yevidiyo ebonakalayo. Nokuba amandla anqunyanyisiwe, ibhetri yangaphakathi ikulungele ukuya kuthi ga kwiiyure ezi-4 zokusetyenziswa ukukhangela intshukumo engaqhelekanga / ilizwi elikhuselwe ngumnxibelelanisi wePIR.
Ngokukhawuleza nangokulula Cwangcisa
Amanyathelo ama-3 okusebenzisa ikhamera. Khuphela i-APP → Bhalisa nge-imeyile yakho kwaye ungene-ngaphakathi → Faka inkwenkwezi kwikhamera kwaye uyongeze kwi-APP.
Ubunjani obunzima bombane kunye nobugcisa obufunekayo. Intaba yamagnetic / udonga inokubamba ikhamera kunoma yiphina indawo ephangaleleyo okanye inamathela kuyo nayiphi na indawo yensimbi.
I-3G kunye neWifi iyafumaneka
Iyahambelana netekhnoloji ye-3G kunye ne-Wi-Fi yamva nje, unokufikelela kumjelo wevidiyo odlalayo okanye imifanekiso erekhodiweyo naphi na, usebenzisa i-IOS yethu yasimahla kunye neeapps ze-Android.
Exhotyiswe ngesiseko semagnethi, iSpy inokujikwa kwaye ilungelelaniswe kuyo nayiphi na i-engile.
Unokuthetha nabani na ngesithethi esakhelwe kunye nemakrofoni.
Ukuvakala / Ukufumanisa ukuhamba
Fumana izaziso xa isandi okanye inkqubela ifunyenwe.
Iinkcukacha zeMveliso Page
I-iSpy CCTV Sim khadi yevidiyo yekhamera Gcina umkhondo wesiqhelo, ulumkele okungaqhelekanga
Ukuba nabani na ungena endlwini yakho uya kwaziswa kwangoko ngeselula yakho.
Beka ikhaya lakho kwifowuni, imini nobusuku
Izinto ziphantsi koqwalaselo nakubusuku.
Inkxaso yekhamera ye-3G / Wi-Fi engenazintambo ezingabonakaliyo
Abaphathi abaninzi abaphathi kunye nenkqubo enye
Ngomsebenzi omnye, unokwazi ukujonga iindwendwe ezininzi zee-wireless home.Kubeka iindwendwe ezininzi njengoko uthanda, naluphi na owuthandayo, Hlalani nisondelele nabathandekayo
Jonga ngefowuni / umgca / Isiphequluli
Ibhetri eyakhelwe ngaphakathi ilungele ukufikelela kwiiyure ze-4 ukusetyenziswa kwanokuba amandla anqanyulwa.
Abancinci kodwa abazizityebi kwiZixhobo
Iprogram yePC Software View
Isampula yokuSebenzisa iiSoftware yokujonga (Inkxaso ye-Android kunye ne-IOS)
15971 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-36 Namhlanje